Farmaajo oo looga digay inuu weeraro Saadaq Joon | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo looga digay inuu weeraro Saadaq Joon
Siyaasiyiinta Beesha Habargidir ee ku jira dowladda ayaa sheegay in Farmaajo uu qaadi doono mas'uuliyadda wixii dhibaato ah oo ka dhasha weerarka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa looga digay inuu weerar ku qaado Saadaq Joon oo maalmo kahor uu xilka ka qaaday, sidoo kalena ka xayuubiyay darajadiisa Ciidanka kadib markii uu Isniintii isku dayay inuu joojiyo kulanka Gollaha Shacabka.
Mahad Salaad, Axmed Macalin Fiqi, Abshir Bukhaari iyo C/raxmaan Odowaa oo katirsan Baarlamaanka ayaa sheegay in Farmaajo uu faray Jeneraal Biixi oo ilmo-adeero yihiin inuu weeraro Saadaq Joon xili uu isku dayay inuu kasoo guuro Afisyooni, islamarkaana kusii jeeday Shiirkole.
Waxay sheegeen siyaasiyiinta iyo Mas'uuliyiinta kasoo jeeda Beesha uu Saadaq Joon ka dhashay in Farmaajo dagaal qabiil uu ka hurinayo Muqdisho, islamarkaana uu doonayo in dalka uu ku qabsado awood Ciidan.
Xildhibaan Fiqi oo sidoo kale ah Wasiirka Amniga Galmudug ayaa xusay in dalka uu ku burburay ku tagri-fal awoodeed iyo Ciidanka qaranka oo si hareer-marsan sharciga loo adeegsaday kadibna lagu daadiyay dhiiga Saraakiil iyo dad shacab ah.
"Waxaan sidoo kale u sheegayaa madaxweyne-hore Farmaajo in uu si shaqsi ah u qaado doono ha dhowaato hase dheeraatee mas’uuliyada qof kasta oo ku dhinta ama ku dhaawacma duulaanka sharci darada ah ee uu si aargoosi ah ugu beegsanayo Gen. Saadaq Cumar Xasan," ayuu yir Abshir Bukhaari.
Wuxuu tilmaamay Senator-ka in askari kasta uu isagu si shakhsi u qaadi doono mas’uuliyada dembiga xuquuqul insaan ee uu gaysto maalin ay ahaatana sharciga la horkeeni doono.
Saadaq Joon ayaa Villa Somalia ka cabsi qabtaa inuu abaabul dagaal ka sameeyo Muqdisho, maadaama xiisad siyaasadeed ay jirto, islamarkaana uu Farmaajo isha ku hayo dhaq-dhaqaaqa siyaasiyiinta mucaaradka ah.
Saadaq Joon wuxuu ahaa taliyaha booliska gobolka Banaadir, isagoo kamid ah ahaa shaqsiyaadka ugu firfircoon dhanka saraakiisha amniga Caasimadda, wuxuuna la soo shaqeeyay Xukuumadii Khayre, oo lagu eedeeyay weerarkii CC Warsame Dec 2017.